अन्ततः छोरी जन्माए पछि विराट सँग बिवाह गर्नुको रहस्य अनुष्का शर्माले बल्ल खोलिन्.. – Ramailo Sandesh
अन्ततः छोरी जन्माए पछि विराट सँग बिवाह गर्नुको रहस्य अनुष्का शर्माले बल्ल खोलिन्..
एजेन्सी– बलिउडमा अत्यन्तै रुचाइएको चर्चित जोडी हो अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली । यो जोडीले लामो समय प्रेममा रहेर अचानक बिहे गरेका थिए ।जति बेला दुबै जना करिअर बनाउने उत्कर्षमा थिए । जति बेला अनुष्का भर्खर २९ वर्षकी थिइन् । दुवैको विवाह भएको करिब डेढ वर्षपछि अनुष्काले चाँडै विवाह गर्नुको कारण खोलेकी छिन् । उनले भनेकी छन् न्, ‘मलाई प्रेम भएको थियो ।
हो, म उसलाई प्रेम गर्थें र अझै गर्छु । यसै कारण मैले चाँडो विवाह गरेँ ।’ अगाडी थपेकी छन् । ‘हाम्रा दर्शक हाम्रो उद्योगभन्दा माथि पुगिसकेका छन् । अब दर्शक कलाकारलाई मात्र पर्दामा देख्नमा रुचि राख्छन् । उनीहरूलाई तपाईंको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर कुनै फरक पर्दैन ।’
अब कलाकारको विवाह भएको छ या छैन भनेर दर्शकले मतलब नै नगर्ने उनले बताइन् । फिल्म जिरोमा अभिनय गरेपछि पछिल्लो समय कुनै पनि फिल्मम अभिनय गरेकी छैनन् । बलिउडमा उनले धेरै सफल फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । र नायिक अनुष्काले केहि हप्ता पहिला छोराीलाई जन्म दिएकी छिन् ।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस्:-नेपालका उवर चालक शुभाकर खड्कालाई अमेरिकामा दु’ब्र्य बहार भए लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोलेका छन् । एसियन अमेरिकनमाथि हिं सा बढेको सूचना आफूले पाएको भन्दै जा’तीय रुपमा त्यसो गर्नु अप’राध भएको र त्यसलाई तत्काल रो’क्न राष्ट्रपति बाइडेनले निर्देशन दिएका छन् ।
उनले मातहत निकायलाई त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै यस्ता गतिबिधिले पनि दोहोरिनु अमेरिकाका लागि राम्रो नहुने उनले बताएका छन् । आइतबार मात्र पनि नेपाली मूलका उबर चालक शुभाकर खड्कालाई तीन जना महिलाले दूव्र्यवहार गरेको भिडियो अहिले संसारभर भाइरल बनिरहेको छ । जसमा २४ वर्षीया मलेशिया किङ नाम गरेकी युवती र उनका २ जना साथीहरुले खड्कालाई दुब्र्यबहार गरिरहेको देखिन्छ ।
दुवै महिलाहरु दु व्यर्व हार र डकैतीको अभियोगमा खोजीको सूचीमा राखिएका थिए । भिडियोमा दु व्य र्वहा र र मोबाइल खोस्ने प्रयास भएको प्रष्ट देखिएको थियो ।आइतबार साँझ ३२ वर्षीय चालक खड्काले महिलालाई मास्क लगाउन आग्रह गरेका थिए । महिलाले मास्क नभएको उ त्तर दिएपछि चालकले बारम्बार अनुरोध गर्दा वि वा द भएको थियो ।
त्यसपछि किङले खड्कामाथि दु व्य र्व हा र गरेकी थिइन् । महिलाले चालक नजिक आएर बारम्बार खोकेकी थिइन् । दु’व्यर्व-हारको भिडियो भाइरल भएको छ ।खड्काले अमेरिकी टेलिभिजनलाई अन्तर्वाता दिदै आफ्नो ज्यान लिने ध म्की दिइएको चालक खड्काले अन्तराष्ट्रिय मिडिया सामु उल्लेख गरेका छन् ।
बिहे कहिले गर्ने प्रश्नमा नायिका निरुता सिंह भन्छिन्-” बिबाह गर्न केटा नै पाएको छैन”
३२ वर्षीया डिभोर्स बधुलाई वर चाहियो,काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकी [सम्पर्क नम्बरसहित]
भोलि मङ्सिर १३ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
अन्तर्वार्तामै हिरोईनहरुको ठुलो झगडा । हात हालाहालको अवस्था, निर्देशक छुट्टाउन नै आए (भिडियो हेर्नुस)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, मंसिर १३ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
के तपाई पत्याउनु हुन्छ ? एउटा बाख्रो २५ लाखमा बिक्यो, के छ यसमा खास विशेषता ?
दुखद खबर : अमेरिकाले १५ दिनको समय भित्र अमेरिकामा बस्ने सबै नेपाली नागरिक लाई देश छोड्न आह्वान, अब के होला त ?